Kunamata kwechokwadi nekwenhema (1-6)
Ziyoni nevanakomana varo (7-17)
Vanhu vanoungana kuzonamata muJerusarema (18-24)
66 Zvanzi naJehovha: “Denga ndiro chigaro changu cheumambo uye nyika ndiyo chitsiko chetsoka dzangu.+ Saka mungandivakira imba yakaita sei,+Uye nzvimbo yangu yekuzororera iri kupi?”+ 2 “Ruoko rwangu ndirwo rwakagadzira zvinhu zvese izvi,Uye uku ndiko kuvapo kwazvakaita,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha.+ “Saka ndichatarisa kumunhu uyu,Kuna iye anozvininipisa neakasuruvara uyo anodedereswa neshoko* rangu.+ 3 Munhu ari kuuraya mukono wemombe akaita seuya ari kuuraya munhu.+ Ari kubayira gwai akaita seuya ari kutyora mutsipa wembwa.+ Ari kupa chipo akaita seuya ari kupa ropa renguruve!+ Ari kupa mupiro wechiyeuchidzo wezvinonhuhwirira zvichena+ akaita seuya ari kukomborera nemashoko evaya vanoita zvemashiripiti.*+ Vakasarudza nzira dzavo vega,Uye vanofarira* zvinhu zvinosemesa. 4 Saka ndichasarudza nzira dzekuvaranga nadzo,+Uye zvacho zvavanotya ndizvo zvandichavaitira. Nekuti pandakashevedza hapana akapindura;Pandakataura, hapana akateerera.+ Vakaramba vachiita zvakaipa pamberi pangu,Uye vakasarudza kuita zvinhu zvisina kundifadza.”+ 5 Inzwai shoko raJehovha, imi munodedereswa neshoko* rake: “Hama dzenyu idzo dzinokuvengai uye dzinokurambai nekuda kwezita rangu, dzakati: ‘Jehovha ngaakudzwe!’+ Asi iye achazviratidza oita kuti mufare,Uye ivo ndivo vachanyadziswa.”+ 6 Kune mheremhere iri kubva muguta, ruzha ruri kubva kutemberi! NdiJehovha ari kutsiva vavengi vake zvakavakodzera. 7 Mukadzi akabereka mwana asati arwadziwa nepamuviri.+ Akabereka mwanakomana asati arwadziwa nepamuviri. 8 Ndiani akambonzwa nezvechinhu chakadai? Ndiani akaona zvinhu zvakadai? Nyika ingaberekwa nezuva rimwe chete here? Kana kuti rudzi rungangoerekana rwaberekwa here? Asi Ziyoni parakangorwadziwa nepamuviri, rakabva rabereka vanakomana varo. 9 “Ndingaita kuti mwana asvike pakuda kusunungukwa, ndorega kuita kuti avepo here?” anodaro Jehovha. “Kana kuti ndingaita kuti munhu asununguke ndovhara chibereko here?” anodaro Mwari wako. 10 Farai neJerusarema uye farai naro+ imi mese munorida.+ Pemberai naro nemufaro, imi mese muri kurichema, 11 Nekuti muchayamwa zamu raro rekunyaradza monyatsoguta,Uye muchanyatsonwa mofarira kukudzwa kwaro kukuru. 12 Nekuti zvanzi naJehovha: “Onai ndiri kuripa rugare rwakaita serwizi+Nekukudzwa kwemarudzi kwakaita serukova rwakafashamira.+ Muchayamwa motakurwa mumaoko,Uye muchatambiswa-tambiswa pamakumbo. 13 Saamai vanonyaradza mwanakomana wavo,Ndicharambawo ndichikunyaradzai;+Uye muchanyaradzwa pamusoro peJerusarema.+ 14 Muchazviona uye mwoyo yenyu ichafara chaizvo,Mapfupa enyu achava neutano seuswa hutsva. Uye ruoko rwaJehovha ruchazivikanwa* nevashumiri vake,Asi achapa vavengi vake mhosva.”+ 15 “Nekuti Jehovha achauya semoto,+Uye ngoro dzake dzakaita sedutu,+Kuti atsive akashatirwa zvikuru,Kuti atuke nemarimi emoto.+ 16 Nekuti Jehovha achaunza mutongo wake achishandisa moto,Chokwadi achatonga vanhu vese nebakatwa rake;Uye vaya vachaurayiwa naJehovha vachava vazhinji. 17 “Vaya vanozvitsvenesa uye vanozvichenesa kuti vapinde muminda*+ vachitevera uya ari pakati, vaya vari kudya nyama yenguruve+ nezvinhu zvinosemesa, nembeva,+ vachapera vese pamwe chete,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha. 18 “Sezvo ndichiziva mabasa avo nekufunga kwavo, ndiri kuuya kuzounganidza vanhu vemarudzi ese nemitauro, uye vachauya voona kubwinya kwangu.” 19 “Ndichaisa chiratidzo pakati pavo, uye ndichatuma vamwe vevachapukunyuka kuti vaende kumarudzi, kuTashishi,+ Puri, neRudhi,+ vaya vanopfura neuta, kuTubhari neJavhani,+ uye kuzvitsuwa zviri kure, iwo marudzi asina kunzwa nezvangu kana kuona kubwinya kwangu; uye vachazivisa kubwinya kwangu pakati pemarudzi.+ 20 Vachaunza hama dzenyu dzese dzichibva kumarudzi ese+ kuti dzive chipo kuna Jehovha, dzakatasva mabhiza, dziri mungoro dzehondo, mungoro dzine matenga, uye dzakatasva manyurusi nengamera dzinomhanya kwazvo, dzichikwira kugomo rangu dzvene, Jerusarema,” anodaro Jehovha, “sezvinoitwa nevanhu veIsraeri pavanouya nechipo chavo muimba yaJehovha chiri mumudziyo wakachena.” 21 “Ndichatorawo vamwe kuti vave vapristi, uye kuti vave vaRevhi,” anodaro Jehovha. 22 “Nekuti sezvichaita matenga matsva nenyika itsva+ zvandiri kusika izvo zvicharamba zviripo pamberi pangu,” ndizvo zvinotaurwa naJehovha, “saizvozvowo vana* venyu nezita renyu zvicharamba zviripo.”+ 23 “Uye kubvira pakugara kwemwedzi kusvika pakugara kwemwedzi uye kubvira pasabata kusvika pasabata,Vanhu vese vachauya kuzokotama* pamberi pangu,”+ anodaro Jehovha. 24 “Uye vachabuda votarisa zvitunha zvevarume vakandipandukira;Nekuti honye dziri pavari hadzizofi,Uye moto uri kuvapisa hauzodzimwi,+Uye vachava chinhu chinosemwa nevanhu vese.”
^ Kana kuti “anogara achifunga nezveshoko.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “seuya ari kurumbidza chidhori.”
^ Kana kuti “mweya yavo inofarira.”
^ Kana kuti “munogara muchifunga nezveshoko.”
^ Kana kuti “simba raJehovha richazivikanwa.”
^ Kureva, minda yaishandiswa pakunamata zvidhori.
^ Kana kuti “kuzonamata.”